चाख्ने होइन, अचार ? | eAdarsha.com
इलाम, १९ माघ । जाडोमा खानामा पिरोपिरो अचार कति मीठो हुन्छ है । सब्जी, दाल अनि अचारका साथै, अलिलि अकबरे टोक्दै खाना खानुको मजै बेग्लै हुन्छ नि । अनि भनिन्छ नि, थोरै भए पनि अचारले खानालाई स्वादिष्ट बनाउँछ ।
अचारजस्तो, खाना त्यस्तै । तपाईंलाई अचार के को मन पर्छ ? आँप, तामा, मेथी, अकबरे, लप्सी के को ? मन परेर मात्र के गर्नु पाउनु पनि पर्याे । तर, चिन्ता नलिनु होस्, इलामको एकै ठाउँबाट अनेक प्रकारका अचारका स्वाद चाख्न पाइन्छ । चाख्न मात्र होइन किन्न पनि पाइन्छ । अचार किन्दा स्वस्थकर/अस्वस्थकर भनेर डराउनु पनि पर्दैन । स्वस्थकर अनि स्वादिष्ट, एकपटक चाखे पनि खाउखाउ लाग्ने, खाइरहुँ लाग्ने । यसको बजार हो, इलाम नगरपालिका–७ स्थित नमूना कलेक्सन अचार पसल ।
यो पसल मात्र होइन, अनेक किसिमका अचार यही बनिन्छ । अर्थात अचारको उद्योग नै यही छ । यसका उद्यमी हुन्, चूडामणि रिजाल र सारदा बाँस्कोटा (रिजाल), जोइपोइ । रिजाल दम्पतीको पसल नयाँ किसिमको होइन, नयाँ तरिकाले गरिएको हो । सामान्य अचार जहाँ पनि पाइन्छ, तर मिश्रित अचारले मन तान्छ, जिब्रो रसाउँछ । पसलमै भेटिएका चूडामणिले भने, “नयाँ भेराइटिजको बनाएको हो । धेरै थोक मिक्स गरेर बनाउँछाैं।” उनले थपे, “धेरै दुःख गर्छाैं तर, विकेकै छ ।”
अचारका पनि विभिन्न प्रकारका छन् । अरू त अरू । अकबरेकै पनि भिन्नभिन्न प्रकार । भिन्नभिन्न प्रकारको विभिन्न स्वाद । कुनै नुनमा हालेको, कुनै बाक्लो लेदोमा राखेको । कुनै मसला मिसाएको, कुनै तेलमा राखेको । यति मात्र कहाँ हो र । अचारभित्रै स्वादिष्ट जलपाइ, मललिडो, टिम्बुर (बोके/सिल), फिलुङ्गो सबै मिसाइएको पाइन्छ ।
गाउँघरमा फल्ने तर प्रयोग नहुने मेलदेखि फर्सीको बियाको अचार पाइन्छ यहाँ । यी सबै अचार बनाउन रिजाल दम्पती टाढा गएका होइनन् । घरमै सिके, घरमै बनाए । यसै सेरोफेरोमा चार वर्षअघि उद्योग खोले । नमूना कलेक्सन अचार उद्योग । शुरुमै केही केही भेराइटिज मात्र बनाइने अचार विस्तारै बढाउँदै लगियो । एक किसिमले गाउँको नगन्य खाद्यान्न सदुपयोगका लागि अचार बनाइएको हो । नयाँ स्वाद दिनका लागि रिजाल परिवारले धेरै थोक मिसाएर अचार बनाएका हुन् ।
औषधिमा प्रयोग हुने जडीबुटीलाई विशेष महत्व दिइन्छ । रिजालले भनेझैँ पसलमा लप्सी, कागती, किबीमा धेरै चीज मिसाएर नयाँ स्वादका अचार बनाइन्छ । चूडामणिले केही समयअघिसम्म कपडाको पसल गर्नुभयो । कपडाबाट घाटा थिएन । छोरालाई ती पसल चलाउन दिएर उहाँले अचारको पसल थाल्नुभएको हो । उद्योगमात्रै हुँदा खासै अचारको प्रवद्र्धन नहुने देखेपछि पसल खोलिएको हो ।
स्थानीय परिकारको प्रवर्द्धन लागेको दम्पती
इलामको अकबरे धेरैतिर चर्चित छ । अदुवा त्यस्तै । तर, अहिले पनि बोराका बोरा भारत बेच्दा नेपालमा बजार पाएको छैन । केही हिस्सा नेपालमा खपत हुन्छ तर, यसकोे बजार भारत हो । रिजाल दम्पतीले यही विषयलाई नजिकबाट बुझेर अचार बनाउन थालेका हुन् । कृषिजन्य उत्पादनको स्थानीयस्तरमा प्रवद्र्धन गर्नपर्छ भन्ने सोच छ उहाँहरूमा । धेरै चीज सम्मिश्रण गरेर अचार बनाउन गाह्रो छ तर, गाह्रो नमानी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दैनिक परिवारकै खटाइ हुन्छ । व्यापारभन्दा उद्योगको काम असहज छ । उद्योगमा आएको वस्तुलाई मिलाएर मिश्रित गर्नुपर्छ । यसको बजार भने स्थानीयस्तर नै हो । इलाम बजार, फिक्कल अनि झापाका केही बजारमा यहाँको अचार पुग्छ । आफ्नै सामग्री चिनाउने काममा उनीहरू लागेका हुन्। चूडामणिले भने, “हामी खेर जाने वस्तुलाई प्रयोग गरेर नयाँ टेष्ट दिन खोजेका हौं ।” विभिन्न सामग्री मिलाएर बनाएको अचारको दाममा खासै महँगो राखिएको छैन । लागत मूल्यभन्दा केही माथिकै दरमा दिइन्छ । उनका अनुसार पसलमा रु ३५ देखि एक हजारसम्मका अचार पाइन्छ । लसुनको अचार ४०० ग्रामलाई रु ३८० पर्छ । यस्तै टिमुरको ४०० ग्रामकै अचार रु ४४० पर्छ ।
चियासहित छुर्पीको प्रचार
पसलमा अचार मात्र होइन, चिया पनि पाइन्छ । चिया पनि विभिन्न प्रकारका पाइन्छ । ‘व्लाक टी’, ‘गोल्डेन टी’,‘पल ग्रीन’, ‘प्रिमियम ग्रीन’, ‘ब्रोकन टी’लगायत चिया यहाँ पाइन्छ । कुन किसिमको चिया हो, प्याकेटबाट चिनिन्छ । ‘ब्लाक टी’ कालो प्याकेटमा, ‘ग्रीन टी’ हरियो प्याकेटमा । छुर्पी पनि प्याकिङ गरेर बेचिन्छ । कमला उद्यमी मात्र होइन, अचारको तालीम सहजकर्ता पनि हो ।
इलामका विभिन्न क्षेत्रमा अचारको तालीमका लागि कमला जानु हुन्छ । परिवारबाहेक दुई व्यक्तिलाई रोजगारी दिइएको छ । भरिसक्के आफ्नो काम आफैं गर्ने, नसक्दा मात्र कामदार लगाउने उद्देश्य रहेको कमलाले बताइन्। लुगा पसल र अचार पसलकै आम्दानीले इलाम सदरमुकाममा घर बनाएका छन् । अनि अन्तुमा रिर्सोट बन्ने क्रममा छ । चुडामणिले आफ्नो कामबाट आफू सन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिए। विगतका कामबाट सिकेर नै नयाँ काममा लागेको उनको भनाइ छ ।
इलाम सदरमुकाममा मात्र होइन, फिक्कल, मङ्गलबारेमा समेत अचारको पसल खोल्न सक्दा आम्दानी हुने चूडामणिको भनाइ छ । आम्दानी मात्र नभई यस्ता वस्तुको प्रवद्र्धन हुने उनको बुझाइ छ । यस्ता व्यवसाय र उद्यम गर्न बढी जोखिम मान्नुपर्ने तर जोखिमअनुसारको फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । यो उद्योग दुई वर्षअघि अकबरे स्टल भनेर भृकुटीमण्डपमा पनि उत्कृष्ट भएको थियो । आउँदा दिनमा उद्यमलाई अझै व्यावसायिक बनाउने चूडामणिको भनाइ छ । इलाममा यस्ता सामग्री अन्त्यतै विक्ने भएकाले पसल विस्तार गर्दा घाटा नहुने उहाँले बताउनुभयो । सरकारी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धनका कार्यक्रम भए अझै बजार बढ्ने अनुमान छ । यसबारे सचेत गराएर स्थानीय वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न सके अधिकतम मूल्यमा बेच्न सकिने उनले बताए ।
सम्भावना देखाउने रिजाल परिवार
पसल हेर्दा लाग्छ, त्यहाँ धेरै थोक छैन तर, पृथक वस्तु छ । जुन किन्नका लागि ग्राहकको भीड लाग्छ । अचारका स्वादका लागि यो पसल सबैथोक हो । यसबाट नयाँ तरिकाले काम गरेमा आकर्षक हुन सक्ने देखिन्छ । गाउँघरमै पाइने अनि खासै प्रयोग हुने सामग्रीबाटै बनिएका सामग्री प्रयोग गर्न जान्दाको परिणाम हो, यो । जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा पनि स्थानीय वस्तुलाई प्रवद्र्धन गर्न पसल र उद्योग खोल्ने सफल भइन्छ भन्ने बुझिन्छ ।